राजपाको साइकल यात्राको संकेत- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १४, २०७४ गंगा बीसी
काठमाडौं — मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) साइकल चिन्ह लिएर प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन गइरहेको छ । यसलाई उसले सडक छाडेर ‘ब्यालेट संघर्ष’ सुरु गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ । तराई–मधेसको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको साइकल लोकप्रिय सवारी साधनले राजपालाई निर्वाचनको मार्गमा सवार गराएको छ ।
राजधानीमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस, माओवादी र विपक्षी दल एमालेसँग लामो सँघर्षपछि राजपा साइकल चढेर मधेस झरेको हो । साइकल चढेर सुरु भएको राजपाको मधेस निर्वाचन यात्राको परिणाम भने दशैंको मुखैमा देखिने छ ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ १४:४५
'स्मार्ट सिटी' ! मा फोहोरको डंगुर [फोटोफिचर]
भाद्र १४, २०७४ तस्बिर : अंगद ढकाल
काठमाडौं — काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले चुनावका बेला महानगरहरुलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउने घोषणा गरे । ती जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको पनि चार महिना कटिसकेको छ ।
यी बीचमा 'स्मार्टसिटी' को नारा दिने जनप्रतिनिधिहरुले महानगरभित्रको सडकको खाल्डाखुल्डी हटाउने लगायत नागरिकका समस्या मत्थर पार्न सकेका त छैनन् नै, बरु अर्को समस्या सहरवासीले भोग्नु परिरहेको छ । त्यो हो उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा दुई सातादेखि थुप्रिएको फोहोर र त्यसबाट फैलिएको दुर्गन्ध ।